दोस्रो बागमती मेयर कप मंसिर १८ बाट हुने
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७७-८-६ गते ८०१ पटक हेरिएको
सर्लाहीको बागमतीमा दोस्रो बागमती मेयर कप फूटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । दोस्रो बागमती मेयर कप फूटबल प्रतियोगिता २०७७ आयोजना हुने भएको हो । यहि मंसिर १८ गतेबाट प्रतियोगिता आयोजना हुने आयोजक अन्नपुर्ण सहयोगी क्लव धरहराले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो ।
बागमती नगरपालिका–३ स्थित क्लबको खेल मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा आयोजक क्लव सहित नगरपालिका भित्रका १२ वटा वडाबाट १२ टिम गरि कुल १३ टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकले बताएको छ ।
मंसिर ३० गते सम्पन्न हुने प्रतियोगिताको विजेता टोलीले नगद रु ५१ हजार तथा उप विजेता टिमले नगद रु २५ हजार सहित शिल्ड, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने छन् । नगर क्षेत्रमा रहेका स्ब्थानिय खेलाडिहरुलाई खेल क्षेत्रमा अवसर सहित सहभागी गराउने,स्थानिय खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतियोगीताको आयोजना २०७५ बाट सुरु भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती नगरपालिकाका खेलकुद समिति संयोजक एवम वडा नं. २ का वडाध्यक्ष दिपक लामाले बताउनु भयो।
२०७५ सालबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण बागमती नगरपालिका –२ ले आयोजना गरेको थियो । २०७६ मा विविध कारणले संचालन हुन नसकेको प्रतियोगितालाई फेरि सुचारु गर्ने प्रयास गरिएको वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष तिलक मोक्तानले बताउनु भयो ।
आयोजक अन्नपुर्ण सहारा क्लबका अध्यक्ष टंक बहादुर बोहोराको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष कृष्ण लामा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
नगरको केही आर्थिक सहयोग र आयोजक क्लवको आन्तरिक पहलमा संचालन हुने खेलमा सबै वडाका खेलाडी,खेलप्रेमी जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा फिफाको नियमानुसार खेल हुने आयोजकले बताएको छ ।